एसपीको असुली बढ्यो ! माथि बुझाउनुपर्ने भन्दै धमाधम रकम उठाउँदैछन् चितवन प्रहरी प्रमूख
ARCHIVE, OFF THE BEAT » एसपीको असुली बढ्यो ! माथि बुझाउनुपर्ने भन्दै धमाधम रकम उठाउँदैछन् चितवन प्रहरी प्रमूख
चितवन । दीपक थापा नेपाल प्रहरीमा चलेको नाम हो । प्रहरी उपरीक्षक थापाले घुस खान्छन् वा गैरकानुनी कार्यलाई साथ दिन्छन् भन्दा धेरैले पत्याउँदैनन् । चिवतनमा गैरकानुनी असुली धन्दामा एसपी थापाको गतिविधि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
चितवनका व्यापारी, होटल व्यवसायी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलगायतमा एसपी थापाले हवल्दार यादवलाई खटाएर असुली गरिरहेको बताइएको छ । ‘डिआइजी गणेश केसीलाई बुझाउनुपर्ने छ भन्दै प्रहरीबाट असुली भइरहेको छ,’ एक होटल व्यवसायीले भने । उनका अनुसार पहिले जुवा तथा गैरकानुनी गतिविधि हुने क्षेत्रमा छापा हान्ने तर पछि तिनै अखडाहरूमा सादा पोशाकका प्रहरी पठाएर असुली भइरहेको छ । चितवनका सबै क्षेत्रमा गरेर मासिक रुपमा पन्ध्रदेखि बीस लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको स्रोतले जनायो ।
मध्यक्षेत्रका डिआइजी गणेश केसीलाई समेत जानकारी भए पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालनिकट रहेकाले थापामाथि केसीले कारबाही गर्न नसकेको बताइन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई समेत बुझाउनुपर्ने भन्दै हवल्दार यादवले असुली गरिरहेको बताइएको छ । आपराधिक हिसाबले संवेदनशील रहेको चितवनमा केही वर्षयता व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत जाने गरेका थिए ।
तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको चाहनाविपरीत उनी प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबमा चिवतन गएका थिए । त्यसबेला अर्यालले सिआइबीका एसपी दिवेश लोहनीलाई पठाउन चाहे पनि थापाले प्रधानमन्त्रीका भाइ नारायण दाहालमार्फत सेटिङ मिलाएर गएका थिए । भरतपुरको मेयरमा दाहालपुत्री रेणु दाहाललाई चुनावमा हर किसिमको सहयोग गर्ने सर्तमा नारायण दाहाललाई बीस लाख रुपैयाँ बुझाएर थापा चितवन गएको स्रोतले बतायो । त्यही पैसा उठाउनका लागि अहिले थापाले असुलीधन्दा मच्चाएको बुझिन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिका १९ को मतगणना जारी रहँदा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्दैछन् भन्ने सूचना एमाले प्रतिनिधिले पहिले नै जानकारी गराएका थिए । तर, एसपी थापाले एमाले प्रतिनिधिको कुरै सुनेनन् । जब मतपत्र च्यातियो, त्यसपछि उनले माओवादी प्रतिनिधिलाई पक्रे पनि । तर, प्रहरीले मुद्दा फितलो बनाएपछि तीन दिनमै माओवादी प्रतिनिधि धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यतिखेर एसपी थापाले आठ वटा मात्र मतपत्र च्यातिएको भनी सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिएका थिए । तर, पछि प्रहरीले ९० वटा मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन बनाएको थियो । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।